US$ 1 billion (2016)
in ka badan 2000
Dahabshiil () waa shirkad bixisa adeega xawaalad lacagta taasi oo isku xidha dhulka ay Soomaalidu dagto waana iyo waliba gabiahaan geeska afrika waxa shirkadan la aasaasay sanadii 1970 xarunteeda uguwayna waxa ay kuleedahay magaalda london waxa ay shirkadani ka shaqaysaa xawaalada waxa ay lacagta u kala xawishaa dhamaan daafaha dunida waxa ay kashaqaysaan wadamo gaadhaya 124 wadan oo caalamka kuyaala .
22 Sidoo kale fiiri
Dahabshiil magaceeda hore waxaa la dhihi jiray Dhiigshiil, Shirkadda waxa aasaasay isla milkiilaha shirkadda, Mudane Maxamed Siciid Ducaale sannadkii 1970. Waxayna milkiilaha iyo qoyskiisu markiiba u dhalan rogeen shirkaddii xawaalad caalamka oo idil ku baahda, oo wakiilladeeda iyo shirkadaha kale ee ay la bahowdey awood u siiya macaamiisheedu inay lacago u soo diraan qoysaskooda iyo asxaabtooda ku nool Geeska Afrika. Shirkadda oo afartan sannadood ka hor hal goob ka soo aasaasantay, maanta waxa ka hawlgala oo u shaqeeya in ka badan 2000 oo qof oo adduunka meel kasta ka jooga. Maanta ma jirto cid deyn amma qaan ku leh shirkadda Dahabshiil, waxaana lagu qiyaasaa daqliga faaidadda sanadkiiba illaa iyo 200 oo milyan oo doolarka maraykanka ah, waxana ka go’an inay dib wax ugu celiso bulshada ay u adeegto.
Dahabshiil magaceeda hore waxaa la dhihi jiray Dhiigshiil, Shirkadda waxa aasaasay isla milkiilaha shirkadda, Mudane Maxamed Siciid Ducaale
Dahabshiil waa shirkad ka kooban adeegyo iyo laamo isku xidhan, oo wakiilladeeda iyo xafiisyadeedu si joogto oo xdhiidhsan u sii baahayaan. Waxa shirkaddu ballaadhisay dhammaan goobaha lacag-bixinta e Afrika iyo kuweeda lacag-dirista ee Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya. Maanta in ka badan 24,000 oo goobood ayaa u adeega oo u furan macaamiisha shirkadda.
Shirkaddu, iyada oo ka duuleysa, fulinaysana istaraatejiyadeeda ah koritaan joogto ah, waxa ay heshiisyo iskaashi la gashay shirkado kale oo la-adeeg ah, oo ku kala yaalla Yurub, Waqooyiga Maraykanka, Aasiya iyo Afrika. Ujeedadu waxa weeye in adeegga Dahabshiil laga helo oo uu gaadho magaalo kasta iyo tuulo walba oo adduunka looga baahan yahay.
Goobaha lacagaha laga bixiyo, Dhabshiil waxa uu ugu talo galay macaamiishiisu inay ka helaan adeeggan, xataa goobaha ugu fogfog ee gobollada kala geddisan, si aanay u kala xidhiidh furan qaraabadooda iyo asxaabtooda debedaha wax ka soo dira. Isku-xidhnaantani waxay suurtogelinaysaa in macaamiishu u aragto shirkadda mid tiir-dhexaad ah oo kaabaysaa nolol-maalmeedkooda, kuna leh door laxaad leh.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahabshiil&oldid=199112"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Febraayo 2020, marka ee eheed 18:39.